Lalàn’ny hery, fa tsy herin’ny lalàna… | NewsMada
Lalàn’ny hery, fa tsy herin’ny lalàna…
Hatramin’izao, andrasana izay ho vokatry ny fanadihadian’ny Bianco ny amin’ny kolikoly teny amin’ny Antenimierampirenena tamin’ny fandaniana ny lalàm-pifidianana… mampikorontana. Hanao ahoana? Hatramin’izao ihany koa, mbola misy ihany ireo depiote ahiahina na voasaringotra amin’izany no mampiaka-peo fa tsy misy izany kolikoly izany. Mba marina… ?
Eo no mahasadaikatra, mahafanina, mahavalalanina… Raha tsy nisy tokoa ny kolikoly, nahoana, ohatra, no tsy mitory amin’ny fanalam-baraka azy ireo depiote voasoketa ho nandray kolikoly? Toy izany koa ny eo anivon’ny fahefana mpanatanteraka hoe nanome. Avela ho vitavita ho azy amin’ny fampiakaram-peo mampievotrevotra hoe tsy misy ny kolikoly ny raharaha?
Andrasana amin’ny hoe mety tsy ahitan’ny Bianco porofo ve ny fampiharan-dalàna amin’ny fanalam-baraka olom-boafidy? Na tsy fahatokisan-tena fa tsy nisy tokoa ny kolikoly, na fanaovana valifaty fa tena tsy misy ny porofo… Raha miandry izany, tsy hita izay fampiharan-dalàna, ny fahatokisana fitsarana. Raha tena tsy nanao kolikoly, mila mitory fa afa-baraka nefa olo-marina izao.
Amin’izany, ny mitonon-tena ho tsy nanao kolikoly indray no mitaky ny fandravana ny Antenimierampirenena. Ho vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izany koa ny raharaha? Mila fantatra sy ampahafantarina ny vahoaka ny marina: ny mpanome sy nandray kolikoly, ny niavian’ny vola… Mba ny herin’ny lalàna no ampiharina, fa tsy lalàn’ny hery ka izay avo vava no toa manana ny marina.
Manova zavatra ny fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny amin’ny lalàm-pifidianana? Mila esorina ireo andininy nampikorontana. Mahamenatra raha ny fahalanian’izany andininy kitoatoa izany no hoe fandresen’ny demokrasia, nefa kolikoly no tao ambadika. Misy amin’ny maha olona ny fahadisoana, nefa efa notoloran-kevitra mialoha fa tsy azo.
Aiza àry ny herin’ny lalàna rehefa tsy mandaitra ny lalàn’ny hery? Eny, na herin’ny vola aza, na ny herim-pamoretana, na ny hery vahiny…